Isibindi simenze waba linxusa labahlwempu ngomdlavuza - Bayede News
Isibindi simenze waba linxusa labahlwempu ngomdlavuza
Home » Isibindi simenze waba linxusa labahlwempu ngomdlavuza
by nguSbani Mngadi
Umakadebona kwezokusakaza nobuntatheli uXolani Gwala ozalwe eminyakeni engamashumi amane nane eyedlule edolobheni elincane iMpendle maphakathi nesifundazwe iKwaZulu- Natal uyibekile induku ebandla. Uyibeke zisuka endaweni yasemakhaya iMpendle engamakhilomitha angamashumi ayisithupha ukusukela eMgungundlovu.
Ukukhulela kwakhe eMpendle okuyindawo yasemakhaya kwaholela ekutheni uMphephethe athole izimfundiso ezifanele okukhuliswa ngazo ingane yomfana emakhaya ezihlanganisa inhlonipho, ukuzehlisa kanye nobuhlakani bendalo.
Lokhu kufakazelwa yindlela umfo kaGwala aziphathe ngayo lapho ephothula umatikuletsheni esikoleni iSt. Marys Secondary wabe esedlulela enyuvesi eyabe yaziwa ngeNatal Technikon, esiyaziwa ngeDurban University of Technology, lapho afunda futhi waphothula khona iziqu emkhakheni wezokusakaza iMedia Studies ngowe-1995.
Emveni kokuphothula iziqu esikhungweni semfundo ephakeme eThekwini, uGwala waqala ukusebenza njengomethuli wezindaba esiteshini esinabalaleli abevile ezigidini eziyisikhombisa Ukhozi FM. Waphinde futhi wadlulela esiteshini esabe siwumakhelwane woKhozi Fm iP4 Radio lapho angazange ahlale khona kade.
Ukuba nogqozi kwakhe nokukhuthalela ukubhekana nezinselelo kwaholela ekutheni athathe isinqumo sokubhekisa amabombo eGoli lapho afi ke khona wasebenza eziteshini zomsakazo iSAFM, iTalk Radio 702, iSABC Africa, iSABC 1 – Asikhulume kanye nesiteshi saseMiddle East asebenza kuso njengomhleli wezindaba i-93.6 RAM FM.
Igalelo lakhe emkhakheni wezokusakazela umphakathi nobuntatheli limenze waba yingwazi okufanele igama layo liqoshwe enqolobaneni yomlando namagugu
Ekhuluma enkonzweni yesikhumbuzo esingathwe ebandleni lamaRoma aKhatholika, uNgqongqoshe Wezemfundo Ephakeme Nokuqeqesha uDkt uBlade Nzimande uthe umfo kaGwala ube yintatheli esebenzise ubuchule nesibindi ekwaziseni isizwe ngokwenzeka ezweni.
Ube esethi izintatheli ezisengamafumuka kufanele zifunde lukhulu kumfo kaGwala njengoba esebenze ngaphandle kokuchema lapho ethula izinhlelo zezindaba kuthelevishini eziteshini asebenze kuzo.
Ngingakusho ngaphandle kokuhloniza ukuthi ukuguquka kwesimo sepolitiki eNingizimu Afrika ngowe-1994 kwasho ukuthi umkhakha wezokusakazela umphakathi kufanele ushintshe indlela oqhuba ngayo.
Lokho kwavula ithuba elikahle kuGwala owayesanda kuphothula iziqu zasenyuvesi ngowe-1995 kwazise phela wangena emsakazweni uKhozi Fm owawungena ezinguqukweni ngenhloso yokuhambisana nesikhathi sikahulumeni oqokwe ngentando yabantu. Lokhu kwaphinde futhi kwasho ukuthi izintatheli kufanele zethule izindaba ngokucophelela nangokungachemi njengoba izwe lalisanda kuphuma kudlambedlu olwathatha imphefumulo yabaningi.
Kanti futhi ziningi izintatheli ezazizithola zigxekwa ngelokuthi zithatha uhlangothi lweqembu elithile ngakwezepolitiki. Yayinkulu ingcindezi ezintathelini njengoba kukhona lezo ezagcina zilahlekelwa umsebenzi. Ngingakusho ngaphandle kokuhloniza ukuthi uGwala ukwazile ngaleso sikhathi ukusebenza ngendlela ekhomba ukungachemi futhi wahlonipha imigomo yobuntatheli elawula lo mkhakha. Isipiliyoni sakhe nokubuza imibuzo kosopolitiki ngaphandle kokuhloniza kwaholela ekutheni izinhlelo zakhe ezinjenge-Asikhulume zibe nedumela emphakathini. Ekhuluma ohlelweni Ezisematheni emsakazweni uKhozi Fm kulandela ukusingathwa kwenkonzo yesikhumbuzo kaGwala eRivonia enyakatho yeGoli, oyintatheli yezemidlalo nosebenze isikhathi eside noGwala uVictor Molefe uthe okwakumhlaba umxhwele ngoGwala ukufuna kwakhe ukubona intsha ithuthuka emikhakheni eyehlukene. Uqhube wathi ngenkathi esakhula eMpendle kuningi ayekubona kuGwala ababemthatha njengomnewabo ikakhulukazi indlela ayeziphatha ngayo emphakathini
Ukusebenza ngokuzikhandla kukaGwala kuholele ekutheni ahlonishwe ngezindondo ezihlanganisa indondo yomethuli wezinhlelo wesilisa ohamba phambili ngowezi-2004 ngohlelo olwabe lunedumela i-Asikhulume.
Umfo kaGwala uxinwe yisifo somdlavuza wethumbu ngowezi-2017 nokwalandelwa wukuhoxa kwakhe emsakazweni i-702 njengoba wabe ethola ukuxilongwa. Ngaleso sikhathi wathola ukuthi ukwelashelwa isifo somdlavuza kubiza kakhulu.
Namuhla iKumkani isinyandezulu
Yingakho athatha isinyathelo sokuxhumana nezinhlaka zikaHulumeni ngenhloso yokunxusa ukuba uHulumeni athathe isinyathelo ukuze kwehliswe izindleko zokwelapha abaphethwe isifo somdlavuza.
Ekhuluma esiteshini sethelevishini kwaSABC, uGwala wakuveza ukuthi kukhathaza kakhulu ukubiza kwezinhlelo zokuxilonga abaphethwe umdlavuza ikakhulukazi njengoba lokho kukhomba ukuthi baningi abantu abahlwempu abavaleleka ngaphandle ngenxa yokungabi nayo imali yokuxilongwa ngendlela efanele.
Lokhu kwakuhambisana nesibindi kanye nokulwa kwakhe nesifo somdlavuza nakuba impilo yakhe yayiqhubeka nokuba buthaka. Impela umfo kaGwala uyilwile impi enzima yokubhekana nomdlavuza.
Ukulwa kwakhe kufanele kulandelwe ngabasele ukuze lizoqhubeka ivuso lokuvikela abahlwempu ikakhulukazi ekutheni bathole usizo ngokushesha ezweni elibuswa ngokwentando yabantu.
Umfo kaMphephethe ozofi hlwa ngoMgqibelo ekhaya eMpendle. Udlule emhlabeni sisancela lukhulu kuye. Ngizothanda ukudlulisa amazwi enduduzo kunkosikazi kaGwala, izingane zakhe nomndeni, ngithi iNkosi iphile iNkosi ithathile.
Lala ngokuthula Mphephethe!
nguSbani Mngadi Nov 8, 2019